Madaxweynaha Soomaaliya oo saacadaha soo socda ku soo wajahan Garoowe – SBC
Madaxweynaha Soomaaliya oo saacadaha soo socda ku soo wajahan Garoowe
Xubno ka tirsan madaxtooyada Dowlada Federaalka Somoaaliya ayaa saxaafada u xaqijiyay in madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta ka degi doono garoonka diyaaradaha Magaalada Caasimada u ah Puntland ee Garoowe.
Madaxweynaha iyo Wafdigiisa ayaa ka soo kici timaya magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halkaas oo uu gaaray gelinkii hore ee shalay kulana kulmay Madaxweynaha Cusub ee dalkaasi Kenya .
Qaban qaabada Soo dhaweynta Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa siweyn loogaga dareemayaa gudaha Magaalada Garoowe, iyadoo siweyn loo sugay amaanka guud ahaan ee magaalada waxaana lagu arki karaa wadooyinka Ciidanka Amaanka oo ku howlan xoojinta amaanka.
Safarka uu ku imanayo gudaha Magaalada Garoowe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kula kulmi doonaa madaxda sar sare ee Puntland siiba madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa isagoo kala hadli doonaa arimo badan oo quseeya xaalada Soomaaliya siiba siyaasadihii ugu dambeeyay ee soo kordhay intii uu madaxweynaha ka noqday dowlada Federaalka Soomaaliya .
Waxay noqoneysaa markii ugu horeysay ee uu garoowe ka soo dego madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ka dib doorashadiisii .